Axsaabtu Ma Reeraa?.Qalinkii Sakariye Awaare | HAYAAN NEWS
Axsaabtu Ma Reeraa?.Qalinkii Sakariye Awaare
Reer Somaliland kuma jiro qof aan Xisbi taageersanayni shiikh iyo shariif, ka aan Xisbina ku jirin ee waxan socda ka aamusanina ciduun buu guusha la jecelyahay, sidaynu isla wada fahansannahayna Xisbiyadani waa reero isbahaystay, sidaa awgeed dhammaanteen waxaynu nahay wada qabyaaliyiin waana sababta loo waayey qof Xisbiga uu taageersan yahay dhalliishiisa sheega amaantiisa maahane.
Kulmiye wuxuu sare iyo hoos ba u sheegay in Xisbiga laba reer ku shaqaysanayaan. Taasi been bay noqon lahayd haddii aan Xukuumadda Siilaanyo si toos ah inoo daawadsiin, oo marka shan meelood laga dhigo saamigii aanay saddex qaadan iyagu. Taasi been bay noqon lahayd haddii aan Madaxweynaha hortiisa Wasiirradu ka sheekayn lahayn Madaxtooyada dhexdeeda Jeegaanta iyo Taariikhdeeda. Taasi bay noqon lahayd haddii Guddoomiyaha Xisbiga ee Siilaanyo ku xiga cid kale la siin lahaa ama ka Muuse Biixi ku xigi doona cid kale loo ballanqaadi lahaa.nin aad ku tidhi Xisbiga ma wada lihin sidee baad ugu qancin kartaa dalka ayaynu wada leennahay?.
Anigu Xisbiga Waddani ayaan guusha la jecelahay. Bal se Odhan maayo Badduu macaanaynayaa oo odhanna maayo masuuliyiintiisu waa dad cusub oo hadda la sameeyey ee waxaan leeyahay waa wejiyadaa aad hore isu wada taqaanneen oo idinka ayaa qiimaynaya.
Hadhow hadduu soo baxo Barnaamij fiican oo dhallinta, shacabka iyo dalka ba anfaci lahaa ayaa u diyaarsan, Bal se ma dammaanad qaadi karo in waxaa ku qoran hadhow sideeda loo fulin doono oo ilaahay baa Og.
Hada ba haddii ay sidan tahay maxaan guusha kula jeclaaday Waddani.? Mar haddii Dalku reero wada yaalla yahay, Dawladdiina reerahaas oo wax qaybsaday ay tahay, Axsaabtiina ay reerahaas oo Xukunka u kala tartamaya tahay, oo wuxu ba ay reero yihiin. Qodobka keli ah ee aan imika leeyahay ugu codeeya waxa weeye. Xisbiga Waddani waa reerihii Somaliland oo dhan macal Jeegaantii. Cid kasta oo han lihina way qaban kartaa hoggaankiisa waanay iska sharrixi kartaa. Waddani wuxuu aaminsan yahay in Xisbiga la wada leeyahay. Kulmiyena waa Sawirkan ee ila Daawo.